Mogadishu Journal » Qaybta 14aad 14
Subaxdii ku xigtey Bridgette ayaa qolkii ay ku xirnayd kusoo booqatay, waxay u sheegtay inay soo ogaatey in Rooraaye aan la xirin oo uu iska tegey, uuna maanta soo laabanayo. Inta aanay weli si fiican ugu warraminna waxaa uyimid askeri aad isu xanaajinaya oo Bridgette u sheegay in haddii ay mar dambe saldhigga booliska kusoo laabato la xiri doono oo lagu soo eedaynayo inay dad dalka sharci darro ku jooga qarinaysey. Way u caddayd waxa meesha ka socdaa, laakiin maaddaama lagaga tamar batay waxay dantu ku kalliftay inayan waqti badan iskaga lumin oo ay Fanaxley nabadey ku tiraahdo sidaas ayayna kaga tagtay Fanaxley oo uur dhawr bilood ahna leh, tarxiilna sugaysa. Dhawr saacadood kaddib inta Fanaxley askari kasoo saaray qolkii ay ku xirnayd, ayaa la keenay qol qurax badan oo ay Fadhiyaan nin ay u malaynaysey taliyihii saldhigga iyo Rooraaye, oo labadu isula qoslayaan sidii ay meel suuq ah joogaan ee aan midkoodna shaqo ku jirin. Ninkii taliyaha ahaa ayaa dabadeed askarigii u sheegay in uu wax yar kaddib usoo laabto dambiilaha, taasoo uu ka wadey Fanaxley. Kursi u dhowaa inay ku fariisatana waa loo sheegay. Markaas ayuu ku yiri:
“Gabaryahay Soomaali baad tahay soo ma aha?” Markay haa ugu jawaabtey ayuu hadalkii sii watay oo ku yiri “Waxaad lix bilood kahor dalka Kenya ku timid fiiso markay kaa dhacdayna waad iska sii joogey ruqsad la’aan; laakiin hadda waxaad noola timid fidnadiinnii oo inankan Kenyaatiga ah ayaan weerar ku qaadday oo naftiisa qatar ku keentay. Sidaad ujeeddidna waa inan qabiil ahaan Soomaali ah oo isagoo taas darteed kaaga naxaya ayuu na weydiistey in dalka keliya lagaa saaro ee aan wax dambi dheeraad ah lagugu qaadin; waanna ka yeelnay, marka berri ayaa lagugu celinayaa dalkii aad u dhalatay ee ogow.” Iyadoo aan la siin fursad ay ku hadashana wuxuu riixay gambaleel ku dhow waxaana soo galay askarigii keenay oo dib qolkeedii ugu celiyey.
Fanaxley waxaa ku caddaatay talo adduun. Waxay Xamar kula laabanaysaa uur aan aabbihiis cidina aqoon, arrinta xirnaanta iyo sida wiilkii ay is-jeclaadeen u galayna waxaa kala weynaadey arrinta soo foodsaartay oo ah siday wax u kala dabbari lahayd marka ay Xamar cagaha dhigto. Way jeclaan lahayd inay jirto magaalo kale oo dalka Soomaaliya ka tirsan oo ay cid ka garanayso, laakiin nasiib darro ma jirin. Talo waxay ku gaartey inay Xamar meel uun ka mid ah ku dhuumato marka la tarxiilo, oo ayay marna reerkooda u tegin iyadoo ilmo caloosheeda ku jiro, xataa haddii ay dantu ku kallifayso in ayan dibeddaba uga soo bixin guriga cid kasta oo ka oggolaata inay la degto. Waxayna bilawday inay ka fekerto tan ugu roon oo sirteeda ay ku qarsan karayso gabdhihii ay Dugsiga Sare ee 15ka Maajo wada dhigan jireen, waqtigii adduunku jacaylka ula wada ekaa oo aan xaajadu sidaan u murugsanayn.